Ambohimahasoa Telo mianaka notetehin’ny dahalo
Menaka mahagaga manala panda sy kentrona…
Eny amin’ny farmasia no azo ividianana ny vitamina E amin’ny sarany …... Ilaina ho an’ny fahasalaman’ny vatana izy ireny ary tena miasa be ihany koa ikolokoloana ny hatsaran’ny endrika sy ny taovolo. Atoronay anao ireo paipaika fikoloana ny hatsarana, amin’ny alalan’ny vitamina E.
Zava-pisotro mahagaga, tsy mampiakatra tosi-drà
Olan’ny Malagasy maro ny tosi-drà miakatra. Rehefa miakatra ny tosi-drà dia misy fambara hafa izay koa miseho, toy ny aretin’andoha mamaivay, ny maso mangirana, ny sofina maneno… Mampitony ireo fambara rehetra ireo sady mitazona ny tosi-drà tsy hiakatra ity zava-pisotro ity :
Zava-pisotro manala havizanana haingana
Zavatra ilaina : · Karaoty 400 g · Betiravy (mena) 350g · Voasarimakirana 1 · Rano ½ · Persily
Ireo sakafo mitsabo volo simba sy mihintsana
Misy akony amin’ny volo ny sakafo hohanina. Raha mihintsana, tsy mety mibontsina, makiana be ny tahony na misy olana hafa mitranga amin’ny volonao dia fantaro fa avy amin’ny sakafo ihany noh ahafahana manarina azy. Ireto ny sakafo tsy tokony atao ambanin-javatra raha te-hanana volo salama tsara :
Belalona : Dokotera sandoka, nanolana zaza 7 taona marary
Tovovavy kely vao 7 taona no naolan'ny dokotera sandoka iray tao Belalona, distrika Befandriana Avaratra ny herinandro lasa teo.
Manala kentrona sy mony ny karaoty…
Azo ikoloana ny hodi-tava tsara ny karaoty. Ilain’ny vatana ity legioma ity, raha atao sakafo fa tena ilain’ny hoditra koa raha hikarakarana azy.
Ranona baranjely + citron: Manadio aty, mampihena
Sady maha-afaka hetaheta no manadio ny ao anaty ny ranona baranjely sy ny ranom-boasarimakirana.
Ny faran’ny herinandro teo no hita soa aman-tsara ny nofo mangatsiakan’ireo olona telo mianaka nalain’ny dahalo an-keriny ary norasarasainy sy nanamparany ny habibiany rehefa nanara-dia omby very tany amin’ny kaominina ambanivohitra Ambalakindresy,
distrikan’Ambohimahasoa. Raha ny vaovao avy any an-toerana dia efa andro maromaro izy telo mianaka ireto no tsy hita no sady tsy nandrenesam-baovao. Ny nofo mangatsiakany sisa araka izany no hitan’ny fokonolona ka niantso maika ny zandary sy ireo tompon’andraikitra any an-toerana izy ireo. Asa maika miandry ireto farany araka izany ny fihazana ireo dahalo nanafaka ny ain’izy telo mianaka ireto izay fantatra fa tena sahy tokoa no sady mahavanon-doza. Tafiditra ao anatin’izany ny famakiana ny tobim-pamaharan’ireo dahalo ao Ambohimahasoa izay tena mahery vaika sy mampitaraina ny maro tokoa. Efa nalevina moa ny razana raha ny fantatra hatrany.